Tafakatra ho 10 ankehitriny ireo efa voasambotra amin’ity raharaha ity, ary mbola misy olona hafa karohina ihany koa. Ity antsoina hoe Laza, sy ny namany roa hafa nosamboria ny alakamisy lasa teo, no niaiky fa nandray anjara tamin’ny famonoana an’i Clarisse, ilay mpanjaitra hita faty voalohany tao amin’ny tanànan’Antanambao. Raha ny fitantaran’ireo olona ireo, dia ny ramatoa iray voalaza fa rafivavin’i Clarisse, no naniraka azy ireo ary nifarimbona tamin’ny famonoana io renim-pianakaviana io, tamin’ny fomba feno habibiana.
« Rehefa tsy tonga naka ny fatiny izay saika haterina tany amin’ny tranon’i Clarisse, io ramatoa mpaniraka io, dia nodoranay ny faty », hoy ny filazan’i Leba, zanak’ilay mompera niala, tompon’ny tanàna ao Antanambao.
Momba ny fomba namonoana ilay tovolahy vao 16 taona, izay tsy hitan’ny havany nanomboka ny 26 mey 2010 kosa, no notantarain’i Alexandre na Lex. Ity farany dia iray amin’ireo voasambotra ny alakamisy teo. Naborany fa nalaina an-keriny io tovolahy zanaky ny tompon’ny trano ipetrahany io, izay tsy lavitra ny toerana nanaovana ny famonoana tao Antanambao ihany. Nangataka tambiny Ar 10 tapitrisa tamin’ny havan’ilay tovolahy izy ireo, saingy naharitra loatra ny fampiraharahana ka niafara tamin’ny famonoana azy, izay mbola mpianatra tamin’izany.